Iyo yakanakisa yeArgentina Linux kugovera | Kubva kuLinux
Iyo yakanakisa yekuArgentina Linux kugoverwa
Ruzhinji rwedu pamwe tinoziva mashoma emamwe akakurumbira ma distros: Ubuntu, Fedora, Mint, Arch, uye zvimwe zvishoma. Nekudaro, kune hwakawanda hwakawanda hwezviitiko; distros ane akanyanya kudhinda asi asiri emhando yepasi. Mune uno mukana, ndinopa kwauri iyo yakanakisa "Argentine distros". 🙂
UTUTO iko kugoverwa kweiyo GNU inoshanda sisitimu, iyo inoshandisa iyo Linux-libre kernel. Zita iri rinoreva rudzi rwegudo (Homonota borelli, Gekkonidae) kubva kuchamhembe kweArgentina. Ututo ndiko kugovera kwekutanga kuzivikanwa sekusununguka zvachose neGNU Project.
Musi waGumiguru 27, 2006, chirongwa cheUTUTO chaive yakaziviswa yeNyika Inofarira neInokudzwa Chamber yeMadeputy eArgentina Nyika.
Webhusaiti yepamutemo: http://www.ututo.org/
Tuquito (Luminescent dumbu chipukanana, chinonyatso kuzivikanwa saLuciérnaga - Lampyridae -) iri kugoverwa kweGNU / Linux kubva kuguta reTucumán, rakagadzirwa naIgnacio Díaz, Chris Arenas, naMauro Torres, wekupedzisira, mugadziri weGarfio, chishandiso chekugadzira kubva kuLiveCD migove seTuquito. Yayo yazvino vhezheni yakagadziridzwa naMauro Torres naMario Colque, vese vari vaviri vhezheni itsva yeGarfio.
Vamwe zvikumbiro zvakagadzirwa nechikwata cheTuquito:
APTITO: dhawunirodha accelerator yeAPT.
Control Center: Inonyanya kunzwisisa nzvimbo yekudzora.
Tuquito RSS: Chiitiko chinozivisa pane zviri pamutemo Tuquito saiti (RSS muverengi).
Hook: jenareta yemakopi ekuchengetedza uye kugoverwa kwakasarudzika.
TuquitUP: Tuquito Shanduro Manager. Inobvumidza pamhepo kugadzirisa.
Kudzora Kwevabereki: Saiti Inodzivirira.
Chirongwa maneja: Kunyorera kuisa uye kusunungura software.
Tuquito WIA: Kunyorera kunozivisa uko iko kuchangobva kuiswa mashandisiro ari.
Webhusaiti yepamutemo: http://www.tuquito.org.ar/
Musix GNU + Linux Kugovera kweLinux kunoratidzwa paLiveCD Live-DVD uye Live-USB zvichibva paKnoppix, Kanotix uye Debian. Neichi chikonzero uye kubvisa software yepamutemo iri mune yavo amai kugovera inoonekwa seye 100% yemahara inoshanda sisitimu. Inonyanya kuitirwa vaimbi, maartist mune zvese, uye yaive yakagadzirirwa kudzidzisa kwehunyanzvi mumakirasi. Iyo ndeimwe yekutanga (uye imwe yeayo mashoma) kugoverwa kweLinux kunozivikanwa se100% yemahara neFree Software Foundation.
Anotanga purojekiti uye co-director weiye pamwe neBrazil Gilberto Gorges parizvino ndiArgentine Marcos Germán Guglielmetti, achiperekedzwa neboka revatambi gumi nevaviri vakaita seSpanish Daniel Vidal Chornet kana José Antonio González García. Musix GNU + Linux zvakare mhedzisiro yebasa rekushandira renharaunda yese yevashandisi uye mapurogiramu, kutanga muArgentina asi uchikwanisa kuunza pamwechete boka renyika dzese rinoumbwa nemaBrazil, Spanish, Uruguayans, America, Mexico, Costa Ricans, nezvimwe.
Webhusaiti yepamutemo: http://www.musix.org.ar/
Lihuen GNU / Linux kugoverwa kweLinux pakutanga kwakavakirwa paGnuLinEx uye kwakagadziriswa neFakitori yeInformatics yeNational University yeLa Plata, Argentina. Pamusoro peyakajairwa yekuisa CD yekugovera, pane Rarama CD vhezheni. Lihuen inotungamirwa yakanangana nedzidzo uye inomhanya pane iyo OLPC projekiti makomputa. Sezvo yeshanduro 2.x Lihuen yakavakirwa paDebian GNU / Linux.
Webhusaiti yepamutemo: http://lihuen.info.unlp.edu.ar/
Dragora ndeye GNU / Linux kugovera kwakanangana nerusununguko, mutauro (Spanish), kugadzikana uye chengetedzo. Iyo ine peculiarity yekuve yakagadzirwa muArgentina isina kuvakirwa pane chero kumwe kugovera kwekutanga, iine mamwe maitiro akafanana neSlackware. Dragora ndiye kumwe kwekugovera kunokurudzirwa neFree Software Foundationkubvira iri 100% yemahara software. Yakagadzirirwa iyo i686 dhizaini, iyo inoipa iyo kugadzikana kukuru pakati pevagadziri, nokudaro ichivimbisa kushanda kwakaringana muzvivakwa zvakasiyana.
KISS uzivi: Iyo KISS musimboti chidimbu chinoenderana nemutsara wechiChirungu: "Chengeta Pfupi uye Zvakareruka". Iyi ndiyo tsika yechinyakare yeUnix yekuchengeta zvinhu zviri nyore.
YAGNI Philosophy: YAGNI chidimbu chinoenderana nemutsara weChirungu: "Hausi Kuida" Iyo Software yekuvandudza uzivi iyo inosanganisira KUTI uwedzere mashandiro kunze kwekunge zvichidikanwa.
DZEMA uzivi: DRY chidimbu chinoenderana nemutsara weChirungu unoti: "Usazvidzokorore" (Usazvidzokorore). Iyo software yekuvandudza uzivi iyo inosimudzira kuti zvidimbu cheruzivo HAZVIMIRIRE. Pamwe iyo isinganyanyo shandiswa pfungwa neprojekti, asi imwe inofungidzirwa.
Webhusaiti yepamutemo: http://www.dragora.org/wiki/
Urli 9.04 ndeye yemahara, inokurumidza uye nyore kushandisa Linux sisitimu inoshanda. Imwe yeshanduro dzayo, "Vieron" yakanyatsogadzirirwa kuita basa rekufambisa sisitimu yekushandisa ive nyore kune vashandisi veWindows vanoda kana kuda kuchinjira kuLinux, ichipawo graphical interface yakafanana chaizvo neVista.
Iyo yakavakirwa paUbuntu neDebian yemahara kugoverwa, nokudaro ichibatanidza kusimba uye kugadzikana kweLinux nechizvarwa-chinotevera, chinokwezva uye chinonzwisisika graphical interface.
URLI 9.04 inopa nyowani uye yakavandudzwa graphic chimiro yakagadzirirwa mhando dzese dzevashandisi, kurongeka kuri nani kwezvirongwa, kuwedzeresa uye pakupedzisira rutsigiro ruzere rweMhedzisiro ye3D neBeryl-Compiz.
Kuenderana kwakawanda kweWin-Modem madhiraivha, kernel nyowani, vhezheni itsva yeALSA, KDE nyowani, mimwe mitambo yemultimedia, rutsigiro rwekutonga kure. Hofisi suite inoenderana neMicrosoft Office zvinyorwa, gadziriso pasuru maneja, isina mavhairasi, web browser, CD / DVD burner uye multimedia player.
Urli 9.04 inoparadzirwa paLiveCD, iyo inobvumidza iwe kuti uiyedze pasina kuimisa kana kugadzirisa chero faira paPC yako. Kana iwe uchida kuiisa gare gare, iwe unofanirwa kungodzvanya pane yekumisikidza desktop yeUrili kuti utange iyo graphical installer.
Webhusaiti yepamutemo: http://www.urli.com.ar/es/index.html
Cyberlinux Iko kugoverwa kweLinux kweArgentina mavambo, akatorwa kana "akashandurwa" kubva kuUbuntu, achigovana software package uye mafaera neyekupedzisira, akagadzirwa uye akagadzirirwa kushandiswa muInternet cafes, veruzhinji manejimendi, makambani, nezvimwe.
Ciberlinux inoshandisa (kubvira vhezheni 1.3 «penguins») Gnome sedesktop nharaunda, ine yakagadziridzwa Windows-dhizaini theme uye seye workstation control chirongwa chefreeware rezenisi chirongwa, cbm.
Kune iyo vhezheni «Pinguinos» (1.3) (2010) inobata DVD (3.8 gb), iyo inogona kushandiswa seRarama DVD. remastersys yaishandiswa kugadzira zvese system backup uye iyo live-DVD.
Webhusaiti yepamutemo: http://tecnicoslinux.com.ar/ciberlinux
Sirius OS chirongwa chinotsvaga kugadzira yakagadzika Gnu / Linux inoshanda sisitimu. Iyo yakavakirwa pane micronucleus system (iri pamusoro pekugonesa iyo yekutanga masevhisi eiyo kernel) uye pairi rinobva kune monolithic kernel, iyo isingatariswe seyakadaro nekuda kwekuitwa kwayo mu "server" maitiro, inogara ichiremekedza iyo POSIX standard .
Sirius OS chirongwa chakavhurika uye chemahara, chinochengetwa nekuvandudzwa nenharaunda, nekuda kwekuedza uye nguva yevashandisi vazhinji. Chero ani zvake anogona kushandira pamwe, kungave muchikamu chekusimudzira, dhizaini, kana kungobatana pamwe nemaonero kana mazano.
Iko kugovera kuri pamusoro peGNOME, iine zvigadziridzo zvayo muiyo kernel uye izvo zvichakurumidza kuwanikwa kurodha pasi; zvinosuwisa nekuda kwematambudziko ekugashira, hatigone kurodhaunura; asi zvichave zvakakodzera.
Webhusaiti yepamutemo: http://sirius-os.com/index.html
Pixart SRL ikambani yakatsaurirwa kuvandudzwa kweSoftware, kunyanya mhinduro dzinoenderana neLinux Operating System, senge: Rxart Desktop, Rxart Server, Rxart Mhuri Pack, Rxart Abogados.
Corel Corporation muna 1998 yakasiya nzvimbo yekutengesa yeLatin America mumaoko ePixart yekusimudzira matunhu. Corel afunga kurega chigadzirwa chayo, Pixart inotora mukana wekuenderera mberi neprojekti ichiwana rutsigiro kubva kuCorel zvese nehunyanzvi uye zviri pamutemo. Panguva imwecheteyo, Corel anoendesa iyo Inoshanda Sisitimu kuna Xandros Inc. yechirungu vhezheni uye Pixart inowana chibvumirano chekusimudzira muchiSpanish nechiPutukezi. Pixart inosaina chibvumirano chekushandira pamwe nekusimudzira kuti chigadzire chigadzirwa muchiSpanish chichitaura neruzivo uye neruzivo rweMusika weLatin America.
Rxart Desktop 3.2 izere Linux desktop OS iyo inosanganisira zvese zvinodiwa kuti zvishande, kutamba kana kutaurirana.
Yakavakirwa pane yakagadzika uye yakavimbika Debian Linux chikuva, iyo inokutendera iwe kunakirwa yako wega yedhijitari nzira yehupenyu, nenzira yaunoda iwe, pasina pesky mavairasi, spyware, uye kumwe kwekutyisidzira kwekuchengetedza.
Webhusaiti yepamutemo: http://www.pixartargentina.com.ar/espanol/index2.html
Ongorora: ese ma distros akagadzirwa naPixart Argentina anobhadharwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Iyo yakanakisa yekuArgentina Linux kugoverwa
Kunyadzisa hakuzi kuziva nhoroondo yevanoshanda munyika yako: hapana munhu akasununguka zvechokwadi kana vasingade kubatsira kusunungurwa kwevamwe. Isu tese tine mukana wekutaura isu, nguva dzose neruremekedzo. Ndicho chikonzero ndinonzwa ndakasununguka kushanyira iyi blog, uye kukurudzira ER, sezvo iri mhando distro; kunyatso kuongororwa neDistrowatch. Ndicho chete chinhu chandichataura pamusoro penyaya iyi. Zvakanakisa kune vese.
Haha. Aya ekuruboshwe-anoshamisa, hazvo, vadikani Chango, kune vazhinji vekuArgentina vasingateedzere zviroto zvako zvecommunist narco-villera udzvanyiriri, chii chauri kuzoita, mureza weArgentina wakachena bhuruu uye chena, kwete jira dzvuku. Kunze kweizvi, ini ndaida kuziva nezve iyi pro magandanga distro, isu tinofanirwa kubvuma kuti ivo ndeepakutanga, ndiani angadai akafunga nezvazvo?
Anonimous, saCarlos26, ivo havazive zvavari kutaura nezvazvo, kugovera uye zvinoenderana naChango zvinoshanda nemazvo, sekukomunisiti narco villera, chokwadi chinondirwadza, uye kutambura mhuri yako kana vachifunga uye vari vanhu pasina dzidzo isingazive kusiyanisa chinhu kubva kune chimwe uye inoteerera kune zvinoitika paCNN. maererano
Ndine urombo, asi kana iwe usingazive nhoroondo, usataure, ndaneta nevanhu vasingavhure bhuku uye vanotanga kupindura pamusoro penyaya isina kana nepfungwa diki. Uye kana uchinyara kuve muArgentina, unogona kuenda kwaunenge uchiziva, kutenderera ikoko neUnited States kukusarura uye kuona kuti unogara mugore redhara. Iko kugovera chete, kana iwe usingade Wallpaper uye ma icon iwe unogona kuzvichinja, kana iwe usati waziva izvozvi.
Kana iwe usina kuzviedza, usataure uye enda unogara muUSA kana usingaifarire ... facho ...
Ini ndaisaziva chero chavo, saka pamwe ndichaedza zvimwe.
Basa rakanaka nebhurogi rako!
Uye nei Red Star isiri mune ino nhanho?
Ini ndakusuwa Tango GNU / Linux: http://www.tangolinux.com.ar/
Pindura kune Vanovenga
Ini ndinowedzerawo Tango GNU / Linux: http://www.tangolinux.com.ar/
Iwe unosiya kwort iri zvakare Argentine.
Mukuru Eärendil, ichi chinyorwa chinoshandira kucherechedza iro basa reArgentina distros risina kana chinhu chekugodora mamwe mapurojekiti munyika. Kune rimwe divi, ini ndaida kunongedzera imwe distro, haisi yeArgentina, asi inobatsira zvikuru basa kune avo vaida kushandisa Slackware uye pamwe nengano kana chokwadi zvakakuomera. Inodaidzwa kuti Salix OS, "iyo bonsai system", uye yakanangidzirwa kudesktop (yakajeka kwazvo nekuda kwayo Xfce uye LXDE vhezheni), zvese zvehunyanzvi uye zvekushandisa kumba (asi zvakare zvinoshanda zvakakwana pama laptops).
Ndinovimba unoona zvichinakidza kuwedzera kune yako slackware-yakatorwa Distros chikamu. Zvido.
Oops, ndakanganwa kukuudza kuti Salix OS yakanyatsoshandurwa muchiSpanish, uye inotsigira nyika zhinji dzinotaura chiSpanish, kwaziso.
Ndatenda zvikuru Chango nekugovana iyi info! Ini ndichaitora ndichifunga nezve ramangwana posvo.
Ini ndoda kuwedzera Huayra, zvinoita kunge chirongwa chitsva uye ndosaka chisiri pano, asi iri zvakare yeArgentina.
Kune avo vanofarira Huayra, ini ndinokurudzira kuverenga kwedu ongororo pane ino distro: http://usemoslinux.blogspot.com/2012/12/probamos-huayra-linux-la-distro-del.html
Ndo izvo zvinoita kuti kupandukira kurware, chii icho gehena rinoitwa nemufananidzo waChe Guevara, mhondi iyo inongoonekwa chete muArgentina neCuba uye vashoma vakarembera "rockers" vasinganzwisise chinhu chakashata nezve zvaive udzvinyiriri hwecommunist. uye zvichiri kudaro. Hazvina musoro zvachose. Ini ndinotsigira rusununguko rwekutaura wega asi rudzi urwu rwechinhu runondiita ndinonyara zvakanyanya kuve muArgentina.
Hi Eärendil, usakanganwa Red Star GNU / Linux, yakakwana kwazvo uye inokurumidza Debian Lenny based distro:
Yakashata Tuquito yakasvibiswa nezita raMauro Torres, mumwe wevanhu vaive nenzvimbo yekubiridzira pane yake server kwaigara Tuquito. Zvinonyadzisa
Mamwe mashoko: http://murder.diosdelared.com/?coment=3837
Pindura kuna Alfmelmaciano
amai 21 amai akadaro
Yakashaikwa Puppy-es OS
Pindura kuna mama21mama
Ini ndinogara ndichiona zvirevo zvakafanana, uye kunyangwe ini ndisingawanzo kuteerera, nhasi ndiri kuzopa maonero angu. Isu maArgentina tinotenda kuti isu takanakisa mune zvese, isu tinorarama mugore rezvitendero zvisirizvo, izvo zvisingarase kusvikira tasiya nyika. Handisi kutaura zvekusiya Argentina, ndiri kutaura zvekusiya nyika yeAmerica. Australia, New Zealand, Asia. Nditende, hatisi ivo vakanyanya kunaka, kune vanhu vane hunyanzvi kupfuura isu, asi havazozviona kusvikira vasiya kondinendi. Ichokwadi zvakare kuti isu takagadzira zvinhu zvakanaka kwazvo uye zvinozivikanwa munzvimbo zhinji. Asi isu tichaenderera mberi muhupenzi hwendangariro, tichirarama munguva yakapfuura uye tichizvidza mauto nekuda kwehudzvanyiriri, ivo varuboshwe-kurwisa. Chero bedzi vachiramba vachiba, uye "vekunze vachatidya." Zvinonzwisiswa?
Nenzira, Debian, uyo anotaura nezvekuti kune vanhu vasingazombo "verenga" bhuku, "savías" rakanyorwa naB kune dhongi, mabhuku mazhinji anogona kuvhurwa, asi pakati pavo ivo vanofanirwa "kuona" duramazwi.
Yakashata sei Cyberlinux xD
Zvakaoma sei kurodha pasi mufananidzo we iso nekuti unobuda pamakumi matatu nematatu ini ndinofunga, sezvo pasi pemakumi matanhatu nemana Windows yangu 32 ine makumi matanhatu uye zvakatora anenge mavhiki maviri kuti ndive kana ndichikwanisa kuisa Linux, chakanyanya kuoma ndicho jodia iso mufananidzo uyezve kuti ungaivhura sei ne winrar uye woikopa kuDVD kana matochi nekutenda kune wese anondiverenga nekundipindura ini ndinopfuura newbie, nyowani kuLinux
Huayra 2.0 ndiyo vhezheni itsva iri kurova zvakanyanya nekugamuchirwa kuzhinji nevashandisi vatsva.
Makomuredhi pano ndinokuunzirai iyo nyenyedzi tsvuku, nekuda kwekupa mamalibrere
Dhawunirodha kubva papeji rako: http://estrellaroja.mamalibre.com.ar/
Pari zvino ndiri kushandisa Windows 7. Ndingadai ndakafomata asi kabhuku kangu kaive kasina software yekutanga uye ndakaisirwa iyo yanga isipo uye handifarire mashandiro ayo. Mumwe wevanakomana vangu akandiraira paLinux. Ndine kunzwisisa kushoma kana kusatomboziva nezvenyaya iyi uye ndinoda kurairwa kuti ndeipi yakandinakira. Muchina uyu ndewekushandisa wega pamba. Ini zvakare ndinoda yakaenzana neHofisi suite sezvo ini ndichishandisa mamwe mapurogiramu akaita seIzwi, Excel, Power Point.
Dzimwe nzira dzeiyo madhora madiki akapfava hofisi mahara mahara (unogona kuzviedza pane chero system inosanganisira guindou $) uye openoffice pakati pezvakaratidzwa, asi pane zvimwe; vese vane power point. Foxit pdf muverengi ingangove imwe sarudzo (uye kwandiri zviri nani uye ndinoishandisa) ye pdf. Kana iri yeyerudzi irworwo rwekushandisa pamwe nekusecha internet uye nechimwe chinhu chidiki, iwe une zvisingaperi zvekugovera zviripo zvekuyedza. Ndiri kuyedza iyo trisquel 7.0 distro iyo ine livecd modhi (unogona kuishandisa nekutanga iyo mubc pc pasina kuisa chero chinhu chine dvd ine mufananidzo mukati kana usb), kana iwe ukatora vhidhiyo kadhi uye yekuisa wifi haisisiri iwe haufanirwe kugadzirisa chero chinhu uye inouya neoffoffice yakaiswa, pakati pezvimwe zvinhu (web browser, vhidhiyo player, gnash, nezvimwewo). Rombo rakanaka uye ndinovimba iyi info ichakubatsira.
Zvekare ndinonyora kutaura kuti kabhuku kangu makumi matatu nemaviri b. Pamwe zvakakosha.
Masikati akanaka vanhu !!! Ini ndinonyora nekuti ini ndoda kutanga kushandisa Linux ne desktop yangu komputa uye handizive kuti ndeipi yandinogona kutanga nayo. Ndeipi yaunokurudzira? Ndinoiwana sei? Ndingafarire chero rubatsiro, ndatenda zvikuru.
Ndakaona bhuku rinonakidza kwazvo, zvinogara zvakanaka kuti uzive zvishoma, ndatenda.
Amm .. kana chimwezve chinhu, mumaonero angu iwe waida iyo Huayra GNU / Linux kugovera 100% yeArgentina uye yakanaka kwazvo. kwaziso kumunhu wese
Thanks mhumhi! Iyi posvo yakabuda mushe Huayra, ndosaka tisina kuiisa ... zvakadaro, isu takashambadza zvimwe zvakatumirwa nezve distro.
Iko kugoverwa kukuru kweLinux kunoitwa nevanhu vakazvarwa muTucuman seni. Ndatenda uye iyi ndeimwe imwe linux flavour yandinoshandisawo. yakanaka uye yese ... shanda
kana vakashandisa tuquito, ndiyo yakanakisa nekuti ine hwema hwetucuman uye vakapakata zvombo kuArgentina asi, vanogona kushandisa chero distros, nekuti vese vakanaka uye vakasununguka uye vese vanotenda linus uye stallman !!
New desktop desktop yeUbuntu 10.10
Maitiro ekuisa Epson T23 purinda